» शिल्पालाई छविको पत्र–‘घर फर्केर आऊ’
शिल्पालाई छविको पत्र–‘घर फर्केर आऊ’
१ श्रावण २०७६, बुधबार १७:०१
मकवानपुर, १ साउन । निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलबिचको सम्बन्ध टुट्ने खतरामा छ । घरेलु हिंसाका विषयलाई लिएर शिल्पाले प्रहरी केस समेत गरेकी छिन् भने केही मिडियाले शिल्पाले डिभोर्स फाईल गरिसकेको समेत दाबी गरेका छन् । शिल्पाले केही मिडियामा अन्तरवार्तामा नै आफुमाथि भएको ज्यादतिका बारेमा बोलेका छन् भने छविले सम्बन्धको बचाउमा अन्तरवार्ता दिने गरेका छन् । यसैबिच छविले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटसमार्फत शिल्पालाई घर फर्केर आउन आग्रह गरेका छन् । के लेखेका छन् त उनले फेसबुकमा ? आउनुहोस् यस बारेमा चर्चा गरौँ । हेरौँ भिडियो–
छविले स्टाटसमा यस्तो लेखेका छन्–‘शिल्पा जी, मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भईसकेपछि तपाईंसँग चाहिँ जिन्दगी बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगीका सबथोक कम्प्रमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईंँ । छातीमा हात राखेर आज एकछिनलाई आफैलाई नढाँटी सम्झनुस् तपाइँले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ? यदि तपाईं पनि आफुलाइ सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आश्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको साहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने, म पनि मेरा कमिकमजोरीहरु सच्याएर गान्धीबादी भएर बस्न सक्छु । अरुको कुरा नसुन्नुस्, आउनुस् हाम्रो घरको ढोका सधैँ तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाईँ साँच्चै मसँग बस्न सक्नु हुन्न भने पनि एक पटक मसँगै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस् । मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस् आजसम्म मैले कुनै पनि श्रीमतीलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाईँलाई पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिनदेखि तपाईँलाई सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नुभयो । म फेरि पनि भन्दैछु, सन्सारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छबी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस् । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ । शुभरात्री ।’
छविको यो स्टाटस आएता पनि यसका विषयमा अन्य कुनै कुरा आधिकारिक रुपमा आएको छैन । छविले घर जोगाउने स्टाटस लेखेता पनि शिल्पाले भने आफुमाथि छविले हातपात गरेको र घर छोड्नुअघि पनि घाँटी समातेपछि आफु फुत्केर भाग्न सफल भएको बताएकी छिन् । अब यी दुईको सम्बन्धले कस्तो मोड लेला ? आसा गरौँ सबै राम्रै हुनेछ ।